WHO cites Zimbabwe record as outrage grows over Mugabe honour - 31 mins ago
Spain to dismiss Catalonia’s government, call elections - 31 mins ago
Trump says he’ll allow release of Kennedy assassination files - 32 mins ago
Uvivela iComrades owine iMngeni half marathon
Mfundo Mkhize - March 17, 2014
UPHOKOPHELELE kwiComrades Marathon ophume phambili emjahweni we Mngeni Half Marathon obungempelasonto eMidmar Dam. USanele Ndlela (26) ubashiye engathi bamile akade bengenele lomjaho obungamakhilomitha angu 42,2 obuhlelwe amakilabhu iCollegians Harriers kanye neHowick Athletics. Kulonyaka lomjaho ubugubha iminyaka eyi-17 ubuhlelwe ukuba uqondane nesonto lokuqwashisa abantu ngamanzi kwazise ubuxhaswe inkampani ephakela ngamanzi eyisikhondlakhondla uMngeni. UNdlela oqhamuka Kwa Shange…
Jerry Barnes - March 14, 2014
IZIHLABANI ezazingaconsi phansi kubalandeli nakubathandi bebhola uMzansi wonke eminyakeni eyadlula zithi i-Orlando Pirates neKaizer Chiefs kungenzeka badlale ngokulingana kulempelasonto. IBhakaBhaka eselibuye ngamandla kulezinsuku lizobhekana nezimbangi zalo ezindala nezeminyaka amaKhosi Amahle, lomdlalo uzobuyela kwesikamaminzela esidala nalapho iBhakaBhaka yazalelwa khona e-Orlando Stadium. Owayengukaputeni kwezimnyama isikhathi eside uDan Malisela uthi akawuboni lomdlalo uba namagoli amaningi ngezizathu ezimbili. “Kulezinsuku…
Akakhali ngalutho uTinkler kwiBhakabhaka
Jerry Barnes - February 13, 2014
UMQEQESHI osabambile kwi-Orlando Pirates u-Eric Tinkler uthi izinto azizimbi eqenjini selokhu ethathe izintambo. Uthi ukuwina umdlalo wokuqala neqembu aliqeqesha isikhathi eside iBidvest Wits kusho lukhulu. UTinkler uthi ukuwina ngo 2-1 kwiWits emva kokulandela emva ngo 1-0 ngasekuqaleni komdlalo kwamchaza futhi kunomlayezo. “Kwangijabulisa engakubona futhi kwanginika ithemba ngekusasa laleliqembu. Bangitshengisa ukuthi bayakwazi ukubuya noma sebephansi, bedliwa….
AMakhosi eza e-Harry Gwala Stadium
Jerry Barnes - February 6, 2014
AMAPHAPHU phansi, amaKhosi ayeza eMphithi. Kubalandeli beKaizer Chiefs kanye nabathandi bebhola kuyo yonke iKwaZulu- Natali, abebecabanga ukuthi umdlalo omkhulu phakathi kwalezingqungqulu zaseSoweto neMaritzburg United bekungenzeka ubalahlekele uye eMoses Mabhida, abakhululeke. Lomdlalo osekukhulunywe ngawo kakhulu uzoba ngoLwesibili mhlaka 11 Febhuwari kusihlwa ngehora lesikhombisa. Kunxuswe abalandeli bebhola ukuthi abathenge amathikithi alomdlalo kusakhanya ngoba aseyatholakala ezikhungweni zamathikithi kanti athengwa…
AbePirates abeneme ngomqeqeshi wabo
Intatheli ye-Eyethu - January 28, 2014
UMQEQESHI weqembu lebhola lezinyawo iPirates uhlaselwe yiqulu labalandeli beqembu lakhe bemjikijela ngamabhodlela nokunye ngesikhathi ephuma enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida ngoLwesine ntambama emva kokuba iPirates ibambane namaZulu ngo 1-1. Abalandeli bePirates bebelindele ukuba leliqembu linqobe kodwa laziphuthisela ngamathuba amaningi, amaZulu atshengisa ukudlala ngokuzimisela. U-Ayanda Gcaba nguye ovule inkundla yokukora efakela iPirates igoli sekungumzuliswane wesibili womdlalo, akangapholisa…
UKomphela ecija iMaritzburg United
Nokthula Khanyile - January 24, 2014
Selusukile ushikishi lwe – PSL
Jerry Barnes - January 22, 2014
USHIKISHI lokudlalwa kwemidlalo ye-PSL seluqalile. Kanti ngendlela ebukeka ngayo lemidlalo, sekuyosinda amadoda ngempela ngoba iboshelwe izacile. Njengobekuvele kulindelekile i-Orlando Pirates iqale kabi ngoMgqibelo odlule ngesikhathi iguqiswa yi-Super Sport United ngo 2-1 enkundleni yayo e-Orlando Stadium.Ngaphandle kokuba nebhadi lokugeja inqwaba yamagoli phambi kwamapali, abadlali beBhakaBhaka babonakale bebuthuntu futhi besakhathele kusukela ngonyaka odlule. Ngalelisonto, mine imidlalo yeligi…
Asixabananga ne-Maritzburg United – Bartman
Jerry Barnes - January 17, 2014
BANINGI abathuswe wukushiya kukamqeqeshi wonozinti kwiMaritzburg United nowazakhela udumo kwi-African Wanderers neKaizer Chiefs, u-Arthur Bartman eya kwiLamontville Golden Arrows. Umbhali wezemidlalo we-Eyethu KZN, uJerry Barnes uxoxisane naye kafushane. JERRY BARNES (JB):Mfwethu, ngiyabonga ithuba onginike lona lokukhuluma nawe. ARTHUR BARTMAN (AB): Nami ngiyathokoza futhi wamukelekile bhut’omdala. JB: Ungumdlali nonozinti onesipiliyoni nohlonishwa kakhulu eMzansi, yini eyenze ushiye…
Ngiyamzwela u-De Sa
Jerry Barnes - January 16, 2014
ISIZULU esijulile nesiqondile ngqo sithi sekubonwa ngokusa.Uma ngicabanga ngemidlalo ezolandelana ubuthaphuthaphu yeBhakaBhaka, ngivele ngithuke futhi ngimzwele umqeqeshi we-Orlando Pirates uRoger De Sa. Indlela imidlalo ehlelwe ngayo i-Pirates iyathusa futhi izodinga abadlali nabaqeqeshi babe nomhlonzo baqine kuze kuyovalwa.Noma iBhakaBhaka iyiqembu elikhulu nelinabadlali abaningi kodwa uDe Sa uyokwazi yini ukubagqugquzela abadlalali ukuba bahlale besemgangathweni futhi bashaye kwasani.Kuyiqiniso…